Palau Island inoronga sunscreen kurambidza kuchengetedza makorari
Location: musha » Kutumira » Kuputsa Kufamba Nhau » Palau Island inoronga sunscreen kurambidza kuchengetedza makorari
Rudzi rudiki rwechitsuwa chePacific rwePalau rucharambidza "reef-toxic" sunscreens kubva muna 2020 mune izvo zvarinoti ndiyo yekutanga-nyika chirongwa chekumisa kusvibiswa kwemakemikari kuuraya makorari ayo ane mukurumbira.
Palau, iri kumadokero kwePacific panenge pakati peAustralia neJapan, inoonekwa seimwe yenzvimbo dzakanakisa dzekudonha pasi rose, asi hurumende iri kunetseka kuti mukurumbira wayo uri kuuya nemutengo.
Mutauriri weMutungamiri Tommy Remengesau vakati pane humbowo hwesainzi hwekuti makemikari anowanikwa mumazhinji ezuva anodzivirira kumakorari, kunyangwe mumiyero miniti.
Vakati nzvimbo dzekudonha dzePalau dzinowanzoitirwa zvikepe zvina paawa zvakazara nevashanyi, zvichikonzera kunetseka kuvaka kwemakemikari kunogona kuona matombo achisvika pakakwirira.
"Pazuva chero ripi zvaro rinoenzana nemagaloni ezuva rinodzivirira zuva kupinda mugungwa munzvimbo dzinozivikanwa dzekudonha muPalau nenzvimbo dzinosvetwa snorkeling," akadaro AFP.
"Tiri kungotarisa pane zvatingaite kudzivirira kusvibiswa kuti kupinde munharaunda."
Hurumende yakadzika mutemo unorambidza "reef-toxic" sunscreen kubva Jan 1, 2020.
Chero ani anopinza kana kutengesa cheki chezuva chakarambidzwa kubva musi iwoyo anotarisana nemari yeUS $ 1,000 3,300 (XNUMX baht), nepo vashanyi vanoiunza munyika vanozotorwa.
"Simba rekutora sunscreens rinofanira kukwana kudzora mashandisiro avo asiri ezvekutengesa, uye izvi zvinopa mukana pakati pekudzidzisa vashanyi nekuvatyisa," Remengesau akaudza paramende mushure mekunge bhiri rapasiswa svondo rapfuura.
Nyika yeUSA yeHawaii yakazivisa kurambidzwa kwezuva rechefu rine muchetura muna Chivabvu gore rino, asi haina kutanga kushanda kusvika muna 2021, gore mushure maPalau.
Ositireriya Hawaii Iceland Palau
Kubatsira mukushanya mune "kunze kwebhokisi" nzira
Mombasa's Moi International Airport kuenda kuzuva
Commercial Refrigeration System Market Segments uye...
Musika wekufamba wepamhepo wakaiswa kusvika pamadhora mazana manomwe nemakumi matanhatu neshanu.